‘कमेडी च्याम्पियन’ को टिकट बिक्री खुला, टिकटको मूल्य कति ? – Halkhabar kura
‘कमेडी च्याम्पियन’ को टिकट बिक्री खुला, टिकटको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को ग्रान्ड फिनालेको टिकट बिक्री खुला भएको छ । यसको टिकट ई–सेवाबाट काट्न सकिने छ ।
चैत १ गते हुने ग्रान्ड फिनाले कोरोना भाइरसका प्रभावका कारण फिनाले बानेश्वरको च्यासल ग्राउन्डमा हुने भएको हो । ग्रान्ड फिनालेका लागि दुई सय टिकट मात्रै बिक्रीमा राखिएको र टिकट दर तीन हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
इटहरीका सुमन कोइराला, रोल्पाका खड्गबहादुर पुन मगर र धादिङका हिमेश पन्त ग्रान्ड फिनालेमा पुगेका छन् । यी तीन मध्ये सुमन र खड्गबहादुर वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट शोमा पुनः प्रवेश गरेका प्रतिस्पर्धी हुन् । ग्रान्ड फिनालेका प्रमुख अतिथि महजोडी र राजेश हमाल रहने छन् ।
विशाल भण्डारीले निर्देशन गरिरहेको कमेडी च्याम्पियनमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई र ऋचा शर्मा निर्णायक छन् । शोमा अभिनेत्री केकी अधिकारी र रिमा विश्वकर्माको सहित अन्य तीन जनाको लगानी रहेको छ । शोको होस्ट पनि रिमा आफैँले गर्दै आएकि छन् ।
कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ ले दर्शकको मन जितिरहेको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कमेडी शोले दर्शकको मन जितेको छ । जसले अहिले युट्युबमा पनि राम्रो दर्शक पाइरहेको छ ।
कमेडी च्याम्पियनको फाइनलमा सुमन कोइराला, खड्गबहादुर पुन ‘खबपु’ हिमेश पन्त पुगेका छन् । सुमन र खड्गबहादुर वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट सोमा पुनः प्रवेश गरेका प्रतिस्पर्धी हुन् । आगामी चैत १ गते ग्रान्ड फिनाले हुनेछ । दर्शकले चैत्र १ गते १२ बजेसम्म भोट गर्न सक्नेछन् । ग्रान्ड फिनालेमा हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठसहितको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।
‘३ प्रोडक्सन’ले निर्माणमा बिशाल भण्डारीको निर्देशनमा तयार भइरहेको शोमा सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, अभिनेत्री ऋचा शर्मा र निर्देशक प्रदीप भट्टराई निर्णायक रहेका छन् । विजेताले २५ लाख नगद र एउटा कार प्राप्त गर्नेछन् ।
कमेडी च्याम्पियनको फाइनलमा सुमन कोइराला, खड्गबहादुर पुन र हिमेश पन्त पुगेका छन् । सुमन र खड्गबहादुर वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट सोमा पुनः प्रवेश गरेका प्रतिस्पर्धी हुन् ।
आगामी चैत १ गते ग्रान्ड फिनाले हुनेछ । दर्शकले चैत्र १ गते १२ बजेसम्म भोट गर्न सक्नेछन् । ग्रान्ड फिनालेमा हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठसहितको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।
Previous थाहा पाईराख्नुस, हासो मुहारको सुन्दरतासंगै उपचारपनि हो
Next सपन कुमार राईको ‘बाटोको काँडा’ सार्बजनिक (भिडियोसहित )